S.W.A.T. Xiliga 4 Wali Lama Daabicin - Madadaalo
S.W.A.T. Xiliga 4 Wali Lama Daabicin
Muxuu Taxanuhu ku saabsan yahay?
Jilaaga iyo Sheekadii Jiidka
Ka warran Xilliga Swat 4?
S.W.A.T. waa taxane telefishan oo ficil ah oo Mareykan ah oo ku saleysan taxane telefishan oo Robert Hamner 1975 oo isku magac ah, kaas oo Rick Husky uu sameeyay. Taxanaha cusub, oo ay ay rabeen Aaron Rahsaan Thomas iyo Shawn Ryan, ayaa laga sii daayay CBS Noofambar 2, 2017,  waxaana soo saaray Filim Asli ah, CBS Studios, iyo Telefishanka Sawirrada Sony.
Saajin Daniel Hondo Harrelson waa jilaagii taxanaha. Hondo, oo u dhalatay Los Angeles, horena u ahaan jirtay Marine, ayaa loo xilsaaray inay amarto koox cusub oo Hubka Gaarka ah iyo Xeeladaha loo yaqaan Last Stop. Hondo aad ayuu ugu heellan yahay kaliya maahan walaalihiis buluugga ah, laakiin sidoo kale dadka ay u adeegaan, sababtoo ah isagu waa madow iyo L.A. ku dhashay kuna koray. Sidaa darteed, wuxuu si gaar ah ugu qalabaysan yahay inuu hogaamiyo kooxda oo uu abuuro xidhiidh ka dhexeeya booliiska iyo bulshada. Natiijo ahaan, bandhiggu wuxuu caan ku yahay muujinta isku dhacyada nolosha dhabta ah ee u dhexeeya booliiska iyo Afrikaan-Maraykanka.
Febraayo 3, 2017, CBS waxay ku dhawaaqday in qayb tijaabo ah oo taxane telefishan ah oo ku salaysan laqabsiga filimka 2003 ee 1970-yadii ABC sitcom S.W.A.T. waxa loo iftiimiyay wax soo saarka. Aaron Rahsaan Thomas iyo Shawn Ryan ayaa qoray duuliyaha, waxaana agaasime ka ahaa Justin Lin.
Faafida COVID-19 dartiis, Telefiishanka Sawirrada ee Sony ayaa joojiyay wax soo saarka xilli saddexaad Maarso 16, 2020. CBS waxay cusboonaysiisay sitcom xilli afraad May 6, 2020, iyada oo la bilaabay badhtamaha xilli ciyaareedka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la xaqiijiyay Juulay 14 in ay bedeli doonto Badbaadiyaha iyo hawada Noofambar 11, 2020. CBS waxay dib u cusboonaysiisay sitcom-ka xilli shanaad Abriil 15, 2021, kaasoo hawada geli doona Oktoobar 1, 2021.
Jilaagii hore ee Maskaxda Dambiyada Shemar Moore waxaa loo tuuray Daniel Hondo Harrelson bishii Febraayo 2017, isaga oo ay weheliyaan la-xiddigaha cusub Kenny Johnson oo loo yaqaan Dominic Luca, oo hore loogu yiqiin Brian Gamble, iyo Lina Esco oo loo yaqaan Christina Chris Alonzo, oo sidoo kale hore loogu yaqaanay Sanchez . Bishii Maarso 2017, tiro ka mid ah xubnaha jilayaasha cusub ayaa shaaca laga qaaday.
Sarkaalka Deacon Kay waxa jilaya Jay Harrington. Filimkii asalka ahaa, Alex Russell wuxuu ku jilayaa James Jim Street, Peter Onoratina wuxuu jilaa Jeff Mumford, . Waa afar xubnood oo ka tirsan Waaxda Booliska ee Los Angeles unugga S.W.A.T. David Lim waxaa lagu tuuray doorka xubinta cusub ee Hondo Victor Tan bishii Sebtembar 21, 2017, ka dibna waxaa loo cusboonaysiiyay heerar joogto ah xilli ciyaareedkii ugu horreeyay. Stephanie Sigman ayaa xaqiijisay inay iska casishay barnaamijka Oktoobar 4, 2019, iyo Amy Farrington waxaa loo tuuray sidii taxane joogto ah oo bilaabmaya xilli ciyaareedka saddexaad.
Shemar Moore wuxuu ciyaaray doorka Sergeant II Daniel Hondo Harrelson Jr.
Yaa u dhashay Los Angeles oo loo magacaabay hogaamiyaha kooxda isku dayo cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha u dhexeeya bulshada iyo LAPD 20-David waa calaamadiisa wicitaanka. Qof kasta oo meesha jooga wuu garanayaa oo si ixtiraam leh ayuu ula dhaqmaa; taas oo keentay in ay si joogta ah u siiyaan xog la xiriirta kiisaskiisa.
Alex Russell wuxuu ciyaaray doorka Sarkaalka III James Jim Street
Wareejintii dhawaa ee Waaxda Booliiska Long Beach 26-David waa calaamadiisa wicitaanka. Karen, hooyadeed, waxay xabsiga ugu jirtaa dhimashadii ninkeeda/abaheed oo rabnaa; waxaa qabtay Hogaamiyihii hore ee Kooxda S.W.A.T Buck Spivey. Dareen la'aantiisa iyo ka tegistiisa waajibaadkiisa daryeelka hooyadii, markii hore wuxuu ku dhibtooday inuu la qabsado xubinnimada kooxda, ugu dambeyntiina waa laga saaray SWAT. Tan iyo markaas, waxa uu dib u helay booskiisa kooxda.
Stephanie Sigman waxay ciyaartay doorka Captain Jessica Cortez
Jacaylka Hondo, ka dibna jacaylkii hore, iyo sarkaalka taliska ee LAPD Metropolitan Division. In kasta oo xoogaa dib-u-dhac ah oo ka yimid darajada iyo faylka, haddana waa sarkaal la ixtiraamo oo leh hammi ah inuu hagaajiyo xidhiidhka ka dhexeeya LAPD iyo dadka deggan Los Angeles.
Lina Esco oo ah sarkaalka III Christina Chris Alonso
Sarkaal hore oo canine ah iyo (hal mar) mid ka mid ah labada sarkaal ee dumarka ah ee SW.A.T 24-Daa'uud waa calaamadeeda wicitaanka. Waxay u shaqeysaa sidii qori-tuure kooxda waxayna saaxiibo fiican la noqotaa Waddada. Waxay bilaabataa xiriir polyamorous xilli 2 in kasta oo ay si cad labada jinsi, laakiin ugu dambeyntii jebiyo off. Carruurta caawiyaha waxay leeyihiin Alonso oo ah ilaahyadooda.
Kenny Johnson oo ah sarkaalka III+1 Dominique Luca
S.W.A.T. 22 Daa'uudna waa calaamadiisii. Waxa uu ahaa darawalkii iyo makaanikkii gaariga Kooxda Black Betty ilaa uu dhaawac ka soo gaaray uu ku qasbay inuu qaato waajibaadka taageerada farsamada. Johnson wuxuu hore uga soo muuqday Shawn Ryan's The Shield.
Peter Onorati oo ah Sergeant II Jeff Mumford
Marka uu weheliyo Kooxda Hondo's S.W.A.T, waa kabtanka kooxda ee Koox kale oo S.W.A.T ah. Waxaa la furay saddex jeer, iyo Payback, wuxuu dib u guursaday ka dib markii uu muddo bil ah shukaansi socday. Ka dib markii la toogtay horraantii dhacdada, wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagay S.W.A.T. qaybta ugu sarraysa.
Xilligii afraad ee S.W.A.T. lagaga dooday CBS Noofambar 2020, si kastaba ha ahaatee, wali lagama heli karo Hulu sabab qaar ka mid ah. Taageerayaasha barnaamijku waxay awood u yeelan doonaan inay si xad dhaaf ah u daawadaan saddexda xilli ee ugu horreeya iyada oo aan arrintu jirin, laakiin waxay noqon doonaan nasiib xumo intaas ka dib. Arrinta ugu weyn ee la soo qaaday ayaa ah sababta xilli-ciyaareedkii afraad aan weli la soo gelin, iyadoo la eegayo caannimada saddexdii xilli ee hore ee Hulu.
Xilliga 4 ee taariikhda lagu daro weli ma xaqiijin Hulu, si kastaba ha ahaatee, qaar ayaa qiyaasaya in lagu dari doono marka xilli-ciyaareedka shanaad uu sii daayo CBS. Si kastaba ha ahaatee, Xiliga 5 waxa la soo bandhigay Oktoobar 1, 2021, halka Xiliga 4 aan wali laga heli karin Hulu.
Markaa hadda ma taqaanaa Swat Season 4? Ma ka heshay maqaalka? Hadday haa tahay markaa u bax maqaalladayada kale si aad ugu raaxaysato daawashada taxanaha iyo filimada aad qorshaynayso inaad daawato.
Dhaqdhaqaaqa Magaalada: Jilid Wadista Wadista ee Dhabta Ah
Clockwork Aquario - Ugu dambeyntii wuxuu imaanayaa PC & Xbox!
xeerka tijaabada tooska ah ee xbox
sida loo tirtiro koontada reddit
xbox dahab ah oo been abuur ah
daawo bandhigyada telefishanka oo bilaash ah
ikhtiyaarrada ugu fiican ee lagu gooyo xadhigga